Shandadaha Alaabada - Shiinaha - Jumlada & Iibso Boorsooyinka Dhimista - Dongguan Zhihao Handbag Industry Co., Ltd.
Hoyga >Alaabta >Boorsooyin
1) Waxaan sameyn doonaa waxkasta oo macquul ah si aan kaaga badbaadino kharashyadaada. (2) Waxaan xiriiri doonaa 24 saac. Waxaan u isticmaali doonnaa isgaarsiin hufan si loo hubiyo isgaarsiinta macluumaadka oo habsami leh. (3) Ka dib markii muunadda la iibiyo, haddii nooca ugu horreeya loo baahan yahay in wax laga beddelo, waxaan ku beddeleynaa muunadda sida ku cad faahfaahinta wax ka beddelka. Nidaamka oo dhan ee soo saarista nooca labaad ee muunadku waa gebi ahaanba bilaash. (4) Sanduuqayaga shirkadda ayaa si joogto ah u shaqeynaya oo ay ka shaqeeyaan shaqaale xirfadlayaal u ah adeegga macaamiisha. Waad noo soo qori kartaa talo iyo cabasho wakhti kasta. Waxaan u aqrin doonnaa una soo jawaabi doonnaa si hufan oo taxaddar leh. (5) Waxaan si adag u xakamayn doonnaa tayada badeecadaha oo wax......
Shandad noocee ah ayaad ubaahantahay Miyaad qorsheyneysaa inaad u isticmaasho shandada kaliya tababarka kubbadda koleyga? Mise weli waxaad dooneysaa inaad u isticmaasho boorsada iskuulka / iskuulka? Haddii aad raadineyso boorso shaqeyneysa oo shaqeysa, qaar waxay leeyihiin qaybo dheeri ah si ay uga soocaan dharka wasakhaysan buugaagta ama ay ugu keydsadaan laptop-yada si aamin ah. Boorsooyinkan isku dhafan waxay kuu badbaadin karaan lacag aad u tiro badan maxaa yeelay uma baahna boorso jimicsi oo dheeri ah!
1) Qaybta iibka: midkiiba. (2) Cabirka baakadka caadiga ah: dhererka 47cmX ballaca 28cmX dherer 12cm ah, waxaan u habeyn karnaa cabirka baakada naqshadeynta iyadoo loo eegayo baahiyahaaga, si loo badbaadiyo xamuulka. (3) Qeexitaanka xirmooyinka: 49cm X 30m X 50cm. 10PCS / kartoonka Waxyaabaha kartoonka: K = K 5-lakab warqad jiingado qaro weyn leh. (4) Miisaanka guud ee sanduuqa oo dhan: 9.2Kg.
(1) Qaybta iibka: midkiiba. (2) Cabbirka hal xirmo ee caadiga ah: dherer 50cmX ballac ah 36cmX dherer 23cm, waxaan u habeyn karnaa cabbirka baakadka iyadoo loo eegayo baahiyahaaga, si lagugu badbaadiyo xamuulka. X 30m X 50cm. 10PCS / kartoonka Waxyaabaha kartoonka: K = K 5-lakab warqad jiingado qaro weyn leh. (4) Miisaanka guud ee sanduuqa oo dhan: 9.2Kg. (5) Miisaanka saafiga ah ee sanduuqa oo dhan: 7.2Kg. (6) Qaabka gaadiidka: badda, hawada, dhul. Waxaan dooran doonaa habka ugu habboon ee gaadiidka saadka.
Skates-ka waxaa loo sameeyaa jimicsi, taraatiga caadiga ah ama diskooga iyo qoob ka ciyaarka. (1) In kasta oo jawaannada qaarkood ay kaliya noqon karaan 100% naylon, qaar ka mid ah boorsooyinka waara waa kuwo xoog badan oo waara. Rip Stop iyo Denier waa weedho mudan in fiiro gaar ah loo yeesho maxaa yeelay waxay u dhigmayaan qalabka loo adeegsado tarabbada harada dhexdeeda waana kuwo aad loogu kalsoonaan karo. (2) Haddii shandadaada aad uga tagto qolka labiska ama safarka ganacsiga, haysashada alaab biyuhu ka soo baxaan Ka caawi sidii loo hubin lahaa inay gudaha qalalan yihiin. (3) Qeybta hoose ee la xoojiyay waa difaac dheeri ah oo ku jira salka bacda si kor loogu qaado cimri dhererkeeda. Bacda oo loo rogo bidix iyo midig waxay kordhin doontaa suurtagalnimada in sagxaddu marka hore soo mu......